BitMiles စျေး - အွန်လိုင်း BTMI ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို BitMiles (BTMI)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ BitMiles (BTMI) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ BitMiles ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ BitMiles တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
BitMiles များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
BitMilesBTMI သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.000115BitMilesBTMI သို့ ယူရိုEUR€0.0001BitMilesBTMI သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.00009BitMilesBTMI သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.000105BitMilesBTMI သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr0.00104BitMilesBTMI သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.0.000727BitMilesBTMI သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč0.00257BitMilesBTMI သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.000431BitMilesBTMI သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.000154BitMilesBTMI သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.000161BitMilesBTMI သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$0.00257BitMilesBTMI သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$0.000891BitMilesBTMI သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$0.000623BitMilesBTMI သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹0.00863BitMilesBTMI သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.0.0193BitMilesBTMI သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.000158BitMilesBTMI သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.000174BitMilesBTMI သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿0.00359BitMilesBTMI သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥0.000801BitMilesBTMI သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥0.0122BitMilesBTMI သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩0.137BitMilesBTMI သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦0.0436BitMilesBTMI သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽0.00848BitMilesBTMI သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴0.00318
BitMilesBTMI သို့ BitcoinBTC0.00000001 BitMilesBTMI သို့ EthereumETH0.0000003 BitMilesBTMI သို့ LitecoinLTC0.000002 BitMilesBTMI သို့ DigitalCashDASH0.000001 BitMilesBTMI သို့ MoneroXMR0.000001 BitMilesBTMI သို့ NxtNXT0.00828 BitMilesBTMI သို့ Ethereum ClassicETC0.00002 BitMilesBTMI သို့ DogecoinDOGE0.0333 BitMilesBTMI သို့ ZCashZEC0.000001 BitMilesBTMI သို့ BitsharesBTS0.00455 BitMilesBTMI သို့ DigiByteDGB0.00431 BitMilesBTMI သို့ RippleXRP0.000399 BitMilesBTMI သို့ BitcoinDarkBTCD0.000004 BitMilesBTMI သို့ PeerCoinPPC0.0004 BitMilesBTMI သို့ CraigsCoinCRAIG0.0526 BitMilesBTMI သို့ BitstakeXBS0.00493 BitMilesBTMI သို့ PayCoinXPY0.00202 BitMilesBTMI သို့ ProsperCoinPRC0.0145 BitMilesBTMI သို့ YbCoinYBC0.00000006 BitMilesBTMI သို့ DarkKushDANK0.037 BitMilesBTMI သို့ GiveCoinGIVE0.25 BitMilesBTMI သို့ KoboCoinKOBO0.0272 BitMilesBTMI သို့ DarkTokenDT0.000106 BitMilesBTMI သို့ CETUS CoinCETI0.333